SomaliTalk.com » Caruurta iyo goobaha kulanka Internedka|Siciid
Maxay yihiin goobaha Kulanka internedku yaase isticmaala?
Goobaha kulanka ee internedku waa meelo ay dadku isku bartaan, ku sheekaystaan isla markaana ay macluumaadka ku saabsan noloshooda isku dhaafsadaan. Waa goobo isticmaalkoodu uu mudooyinkan danbe aad u sii badanyo. Tusaale ahaan shabakada la yidhaa Facebook waxa ka diwaan gashan in ka badan 250 million xisaabood (account). Sidoo kale shabakada la yidhaa Myspace waxa iyana ka diwaan gashan 263 million1 xisaabood. Ubadka yaryar iyo dhaliinyarada soo koraysa ayaa ugu badan dadka isticmaala goobahan. Afti aan ka qaadanay caruur Soomaaliyeed oo da’doodu u dhaxayso 10-14 waxa ka soo baxay in 70% caruurtaasi ay isticmaalaan qaar ka mida goobahan. Facebook, Twitter, Myspace iyo Window Live ayaa ka mida goobaha kulanka ee internedka.
1. Waalidku waa in uu Kordhiyo macluumaadkiisa ku saabsan goobahan kulanka interendka. Hadii uu waalidku jaahil ka yahay khatarta ay leeyihiin goobahanina way adakaan in uu ubadkiisa uga digo dhibta uga iman karta shabakadahan.
2. Caruurta ay dadoodi ka yartahay 13’ka sharcigu uma ogola in ay xubin ka noqodaan goobahan. Laakiin ciyaalku da’adooda been ayay ka sheegaan taas oo keenta in aad aragto ilmo 9 sano jira oo si uu goobahan uga mid noqdo sheeganaya da aad uga wayn da’diisa. Sidaa darteed waa in uu waalidku u sheego ciyaalkiisa in aanay shabakadahan ka mid noqonin hadii aanu sharcigu u ogolayn. Marka uu sharcigu u ogolyahayna waa in aanu ilmuhu da’adiisa been ka sheegin si aanay xidhiidh ula soo samaynin dad aad uga waawayni.
3. Goobahani waa goobo cid kasta u furan sidaa darteed waa in waalidku uu ubadkiisa ku adkeeyaa in aanay macluumaadka khaaska ah sida ciwaankooda, iskuulkooda, tilifoonadooda iwm aanay ku soo dhajin meelahaas.
4. Sawirada meelahaas lagu dhajiyo waxa dhici karta in ay ku dhacaan gacan aan aamin ahayn. Sidaa darteed waalidku waa in uu caruurtiisa ku baraarujiyo in aanay shabakadahan ku dhajin sawiro hadii si xun loo isticmaalo ay hadhow iska qoomamayn doonaan. Si khaas ah waa in arinkan gabdhaha loogu baraarujiyo.
5. Waalidku waa in uu ubadkiisa ku baraarujiyo in aanay shabakadan kula saaxiibin cid aanay iska hubin cida ay yihiin. Internedka waxa ku badan dadka beenta naftooda ka sheega. Qof kasta oo aad kula kulanto netka lama qaato warka uu kuu sheego. Dadbadan oo aaladan lagu bartaa marar badan ma aha cida ay kuu sheegayaan in ay yihiin.
6. Waa in uu waalidku ka warhayaa dadka ay ubadkiisu aaladan kula saaxiibayaan.
Hadaad rabto in aad akhrido maqaaladayda kale fadlan boogo
3 Jawaabood " Caruurta iyo goobaha kulanka Internedka|Siciid "
a/shakur Ali mohom'ed says:
Thursday, December 10, 2009 at 3:17 am
MARKA HORE WAXAAN SLM UMADA ISLAAMKA MEEL KASTA OO AY JOOGAA WAXAANA UGU DIGAYA IN AAN LOO ADEEGSAN DHALAN YARADA SIQALDAN OO KU SALEYSAN DIINTA ISLAAMKA (NAME A/SHAKUR Ali mahom’ed ) oo jooga moqdisho
Sunday, November 1, 2009 at 12:28 pm
Aniga waxan arkey website yadan ay yiraahaan waa islam oo dadka islamka isku barta gabdhaha iyo wiilasha hada gabar baa waxay wiil aysan waligeed arag sawirkeeda u direysaa,bal yaa u baneeyey nin ajinabi ka ah in ay sawirkeeda siiso waa cajiib.wuxu kaloo qoraaga kusaxsan yahey dad kaan aan diinta faham durugsan u lahey in ay kula xiriiraan dad aan cilmi baraadhan u laheen diintooda waa run alahi kuwasaaba ugu daran umada baran habaabinaya.nabad galyo
Tuesday, September 8, 2009 at 5:11 am
asc wr wb ramadaan kariim!
run ahaantii waa arin aad
u wanaagsan arintaan waxaana kula talin lahaa walaalaha isticmaala yaysan isga lomin waqtiga meelahaas aan faa iidada lahayn